I-Radiant Studio e-The Palm Tower Residences - I-Airbnb
I-Radiant Studio e-The Palm Tower Residences
U-Deluxe Holiday Homes unokuphawula okungu-1823 kwezinye izindawo.
Leli khaya elihle lamaholide elisekelwe ePalm Jumeirah linikeza ukubukwa okungenakunqotshwa kwendawo ehlala iphambili yedolobha efunwa kakhulu. Thola ukwelashwa okunethezekile kwezinkanyezi ezinhlanu ekunethezekeni kwekhaya lakho kulo mbhoshongo olindelwe kakhulu eduze ne-St. Regis Hotel, etholakala e-Arabian Gulf. Ikhuthazwe ngamanothi eklasi okuluhlaza okwesibhakabhaka okujulile nokumhlophe, iyunithi yesitezi esiphezulu iphromotha i-ambience epholile yazo zonke izakhamuzi zayo. Ukubuka okudonsa umoya kwama-fronds nolwandle oluluhlaza kuyizinto ezijwayelekile ezivela efasiteleni.
I-Palm Tower iyisengezo esisha sokunethezeka sezinkanyezi ezinhlanu esinezitezi ezingu-52 zokwakheka okuhle nokuvulekile. Izakhamuzi ze-Palm Tower zizonikezwa ukufinyelela okukhethekile ezindaweni eziningana ezisendaweni kuhlanganise nezindawo zokudlela ze-premium zehhotela, kanye ne-spa enkulu kanye nezindawo zenhlalakahle. Umbhoshongo odumile, ogqugquzelwe ukuma kwesundu, unamasevisi avelele ahlanganisa indawo yokudlela ye-SUSHISAMBA eyaziwa emhlabeni wonke esitezi se-51 kanye ne-The View e-The Palm, indawo yokubuka umphakathi esitezi se-52 enikeza ukubukeka okuhlaba umxhwele kwe-Palm Jumeercial, i-Gulf yase-Arabia kanye nesibhakabhaka sase-Dubai. Izakhamuzi zizojabulela futhi ukungena ngokuqondile e-Nak wheel Mall, indawo yokuthenga eyingqophamlando, indawo yokudlela nezokuzijabulisa.
✓ Wonke amasevisi afakiwe (Ugesi, amanzi, i-Inthanethi Esezingeni Eliphezulu, i-TV ene-Cable Channel, i-AC/Chiller)
IPalm Jumeirah ingenye yezindawo zikanokusho kakhulu eDubai, ecwebezela ngokucwebezelayo
ama-marinas, izinketho zokudlela ezinhle ze-al fresco, izitolo ezinkulu ezisezingeni eliphezulu ezinemikhiqizo edumile emhlabeni, kanye
izindawo zokungcebeleka eziphawulekayo. Imiphakathi engomakhelwane bayo yiDubai Marina, Jumeirah
Izindawo zokuhlala zasolwandle, iJumeirah Lakes Towers, neBlue Waters Island. Amaminithi akude ngokushayela kunezindawo ezinkulu zebhizinisi njengeMedia City, Internet City, Knowledge Village, kanye neBusiness Bay.